मेयर र उपमेयरको चर्काचर्की ! – sunpani.com
मेयर र उपमेयरको चर्काचर्की !
सुनपानी । २३ भाद्र २०७७, मंगलवार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशमशेर राणा र उपमेयर उमा थापामगरका बीचमा चर्काचर्की भएको छ ।
एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले यहीको गैरसरकारी संस्थामार्फत नेपालगञ्जमा वितरण गर्न थालेको राहतको विषयलाई लिएर मेयर राणा र उपमेयर थापाबीच चर्काचर्की भएको हो । उक्त संस्थाले नगरका दुई सय जनालाई नौ हजारका दरले राहत वितरण गर्न थालेको विषयलाई उपमेयर थापाले मेयर राणा र बोर्डलाई थाहा नदिएपछि मेयर र उपमेयरका बीचमा चर्काचर्की भएको स्रोतले बताएको छ ।
संस्थाले शुरुमा नगरका विपन्न गरिव दुई सय जनालाई प्रतिव्यक्ति नौ हजारका दरले राहत बाँड्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । उपमेयर थापाले विपन्न गरीव भनेर दुई सय जना छनौट गर्न गाह्रो हुने भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राहत दिन सुझाव दिनु भएको थियो । त्यही सुझाव अनुसार संस्थाले नगरका सबैजसो वडाबाट अपाङ्गताको लिष्ट निकालेर राहत बाँड्ने चरणमा पुगेको थियो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा दुई सय जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राहत बाँड्ने कुरा मेयर राणा र बोर्डलाई थाहा नदिइएपछि मंगलबारको बैठकमा मेयर र उपमेयरको चर्काचर्की भएको थियो ।
‘मलाई र बोर्डलाई बाइपास गरेर जाने ? मेयर राणा बम्किनु भयो । यो कुरालाई उपमेयर थापाले भन्न बिर्सिएको भनेर टार्नुभयो । मेयर राणाले ‘मैले सबै स–साना कुरा शेयर गर्छु । यत्रो ठूलो कार्यक्रमका बारेमा नबताउने ?’ भनेर एकोहोरो पेलिरहनु भयो । उपमेयर थापा पनि के कम, त्रिभुवनचोकको सौन्दर्यकरण कोटेसनबाट गर्दा मलाई पनि खबर गर्नु भएन नि ? भन्नुभयो । मेयर र उपमेयरका बीचमा केहीबेर आरोप–प्रत्यारोप चल्यो ।
मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरुको उक्त बैठकले राहत बाँड्ने तर नगरको बोर्ड बैठकको निर्णय गरेर वडाध्यक्षहरुमार्फत नामावली ल्याउने कुरा भएको छ ।
बर्दियाका दुई जनाको मृत्यु
वडा सदस्यसहित चार जनाको मृत्यु
थप तीन जनाको मृत्यु
प्लाज्मा जुटाउने माधवी
रातभरीमा ५ जनाको मृत्यु
थपिने र डिस्चार्ज हुने बराबरीजस्तै
वडा नं. १ को उत्कृष्ट कार्य, घर–घरमै डाक्टर